Cube iWork 12 a un precio de escándalo: 179 euros | Androidsis
Nweta Cube iWork12 maka ihe na-erughị euro 180 ma nweta kiiboodu n'efu!
Banggood na-aga n'ihu na ya akpan akpan n'oge mgbasa ozi na-enye n'ezie na-akpali ego. O buru na ubochi ole gara aga anyi gosiri gi onyinye kacha mma iji nweta ngwaahịa Xiaomi dị iche iche na asịrị ahịa, ugbu a ọ bụ n'aka nke IWork 12 cube, Mbadamba mbadamba abụọ nwere Windows 10 na gam akporo 5.1 nke na-abịa na ego na-adọrọ mmasị.
Ma ọ bụ na ruo August 16 ị nwere ike ịnweta mbadamba Cube iWork 12 maka naanị 179 euro na ịpị ebe a na-abanye na koodu mgbasa ozi 1cf2de. Ntinye ego 20% nke ị ga-agbakwunye onyinye wireless keyboard bara uru na euro 50.
Nka na ụzụ e ji mara Cube iWork 12 mbadamba
Iji kwuo na mbadamba Cube iWork 12 bụ ngwaọrụ zuru oke nke nwere chassis aluminom nke na-enye ọnụahịa ahụ ezigbo uru. Obi nke silicon ya nwere ihe nhazi Intel X5 Cherry Trail Z8300 na ya Nchekwa 4 GB Ram Ọ na-ekwe nkwa inye ezigbo arụmọrụ mgbe ị na-eji sistemụ arụmọrụ abụọ nke ngwaọrụ nwere.
Ma nke ahụ bụ Cube iWork 12 na-arụ ọrụ ma Windows 10 na gam akporo Remix 2.0, ụdị nke sistemụ arụmọrụ Google nke dabere na Android 5.1. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ụdị gam akporo dị ka nke kachasị ọhụrụ, na-echebara ọnụahịa ya echiche anyị enweghị ike ịjụ nke ukwuu.
N'ịga n'ihu na nkọwa ndị ọzọ, Cube iWork 12 nwere a 12.2-inch ihuenyo nke na-enweta mkpebi nke 1920 x 1200 pikselụ, na mgbakwunye na 64 GB nke nchekwa dị n'ime, gbasaa site na oghere kaadi micro SD ya na batrị mAh 9.000, na-enye mbadamba ụyọkọ a nnukwu nnwere onwe.
Cheta na Banggood na-aga n'ihu ịnwe onyinye dị iche iche na-atọ ụtọ na webụsaịtị ya, yabụ egbula oge ile anya na ịpị ebe a iji nweta ohere ha na-enye n’oge ọkọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nweta Cube iWork12 maka ihe na-erughị euro 180 ma nweta kiiboodu n'efu!
Google Duo karịrị 100 nde nbudata mana ...